Rugby အမျိုးသားဝတ်ပိုလိုရှပ်အင်္ကျီ ရပ်ဘီဆိုင်: Sexy Rugby
ကြိုဆို » ရပ်ဘီဆိုင်ရှိရပ်ဘီအမျိုးသားဝတ်ပိုလိုရှပ်အင်္ကျီ
သင်ကပရိသတ်ကြီးတစ်ယောက်ပါ အပျော်တမ်းအသင်းအားကစား ရပ်ဂ်ဘီလိုအင်အားကြောင့်လား အကောင်းဆုံးဘောလုံး၊ ဘတ်စကက်ဘောသို့မဟုတ်ရပ်ဂ်ဘီပွဲများကိုကြည့်ပါ ရပ်ဂ်ဘီလူပိုလို သင့်အတွက်အထူးဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောရပ်ဂ်ဘီဆိုင်၌။ တစ် ဦး က ပိုလိုလူဒီပိုလို ရပ်ဂ်ဘီအဝတ်အစားဝယ် အထူးသဖြင့်သင့်တော်သည် homme စိတ်ဝင်စားတယ် မဟာဗျူဟာအသင်းအားကစား.
La ရပ်ဂ်ဘီအဝတ်အစားဝယ် သင်၏စွန့်ပစ်ခြင်းမှာထည့်လေ့မရှိ ထူးခြားသောလူပိုလို သူ့ဟာသူ ခက်ခဲသောပစ္စည်းများမှဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောပိုလိုတွင်ပျော်စရာအားလုံးအတွက်အရာအားလုံးရှိသည် အားကစားပရိသတ်များ။ ဝတ်ဆင်ရန်ပျော့ပျောင်း။ သက်သောင့်သက်သာရှိသောထည်၊ အလင်း & sporty အသွင်အပြင် နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အခြေစိုက်စခန်းကဒီပါစေ ပိုလိုလူ le ရပ်ဂ်ဘီအဝတ်အစား အသင်းအားကစားတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူအပေါင်းတို့၏တန်းတူ။
De အနက်ရောင်အီးကဒီပိုလို ရပ်ဂ်ဘီအဝတ်အစားဝယ် အားလုံးအခါသမယကိုက်ညီ။ ခင်ဗျားတို့ဝါသနာပါတဲ့အချိန်မှာအဲဒါကိုသုံးနိုင်တယ် အားကစားကစားသည် သို့မဟုတ်ရုံလိုပဲ နေ့စဉ်အဝတ်အစား။ ရုံးမှာ ၀ တ်ရတာ ၀ တ်တာကောင်းတယ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်.
အတွက်အပြည့်အဝဗဟိုပြုဒီဇိုင်းနှင့်အတူအားကစားဝuniverseာ နှင့်ရပ်ဂ်ဘီ, ဒီ ပိုလိုလူ လက်တိုနှင့်2ခလုတ်များသည်perfectlyုံနှင့်လိုက်ဖက်သည် စတိုင်လူ၏အရသာ အဘယ်သူသည်အားကစားကစားရန်ကြိုက်တယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, SR လိုဂို Sexy ရပ်ဂ်ဘီ သိသိသာသာအပေါ်ရရှိနိုင်မော်ဒယ်၏အမြင်အာရုံ rendering တိုးတက်စေရန်ဒီဇိုင်းကိုထည့်သွင်းထားသည် ရပ်ဂ်ဘီအဝတ်အစားဝယ် အွန်လိုင်း။ ရရှိနိုင်ပါသည် အရွယ်အစားအများအပြားသင့်ရဲ့အရွယ်အစားကိုဘယ်လောက်ပဲအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေမယ်။
အားလပ်ရက်များ၌သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူတစ် ဦး အားသင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါသို့မဟုတ်အရည်အသွေးမြင့်သောအဝတ်အစားများကမ်းလှမ်းပါ။ ဒီရပ်ဂ်ဘီရပ်ဂိုးပိုလိုရှပ်အင်္ကျီသည်လူတိုင်းကိုစိတ်ကျေနပ်စေမည့်မူရင်းထူးခြားသည့်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည်အလွန်အဆင်ပြေသောကြောင့်သူသည်အထူးကြော့ရှင်းသောအမျိုးသမီးများကိုလှည့်ဖြားရန်မခက်ခဲပါ။ ကြားနေအရောင်များသည်ပိုလိုကိုဝတ်ဆင်ရန်မတူညီသောအဝတ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့်ခွင့်ပြုသည်။
အားကစားပစ္စည်းကိရိယာများ (သို့) အမျိုးသားရိုးရှင်းသောပိုလိုများအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်
အရွယ်အစား: S, M, L ကို, XL, 2XL
Grammage: 177 g / m²
အမျိုးသားများအတွက်ရပ်ဘီ Hoodie »